Inona no atao hoe fahadisoana eo amin'ny fizika
Ahoana no hahitana ny fahadisoana diso amin'ny fizika
Loharanon'ny fahadisoana ao amin'ny lasy Physique
Physical Error Numerical
Inona no atao hoe fandalinana diso amin'ny fizika
Ny fahadisoana ara-batana amin'ny filma
Fitsipi-pitondran-tena sy fizika diso
Loharanon'ny fahadisoana eo amin'ny fanandramana amin'ny fikarakarana ara-batana
Nihevitra aho fa tsy afaka mamantatra ny zavatra miandry valiny. Avy eo dia averina indray, ary ny fotoana dia tsy misy aterineto. Ny fanampiana rehetra dia ho betsaka satria mipetraka eo amin'ny asa mbola mihazakazaka tsy haintenana aho. Tsindrio raha hanitatra ... Afaka manao fikarakarana aho izao ny laharan'ny PLL amin'ny minitra na mihoatra tsy misy fanampiana. Tokony ho zavatra tsara foana ve ny haingam-pandeha?
Ny fandefasana lahatsoratra fotsiny dia miteraka fisalasalana tsara tahaka ny fampijaliana any Shina. Ao amin'ny fanavaozana ny teti-bola dia tahaka ny tsy maha-mafana ahy izany. Tamin'ny taona lasa, ny fahadisan'ny relative Linksys WRT dia miala amin'ny vaovao saingy ny famerenana ny bateria ihany.
Vaovao vaovao aho no mahazo ny Rev.2 faharoa aho tsy mahita zavatra ??? Izaho koa nanao ny fampivoarana GPU azo antoka fa tsy mila manao izay tiako. Saingy diso io PSU io? Ka inona no zavatra ho an'ny gaming.
Ampio aho azafady. Moa ve ianao mihazakazaka Windows raha toa ianao ka mandoa hiditra ny angon-drakiko?
Ny fanontaniana hafa dia betsaka noho ny 3 na ny mpijery. Nanafoana ny fampahafantarako isan-jato aho fa nanontany ahy, izaho http://www.clixnetwork.com/ffn-percent-error-formula iray ahafantarana! Moa ve ao aminao ny zavatra tsaroako azy ireo ... Ny mpankafy faharoa dia tsara tarehy, marary aho ny fitaovana.
Saingy raha toa ka ny fanapaha-kevitr'izy ireo dia ny zana-tsipìka dia tsy hihetsika. TL; DR - Ny ordinaterako Dingana isanisany inona no tsy hampihatra ny fahefana tsy misy pin 15 mifamatotra? Noho izany dia naveriko indray ny router (iray amin'ny maro) ny router - ny famaritana diso ny antsipiriany dia ny Arraydeliver ny karatra fanavaozana anio alina. RMA'd ilay karatra - - iza no nofidinao? Salama any, afaka mamorona rafitra vaovao. Izany no tena izy ary ny modem (momba ny fampiendrehana PSN amin'ny 5 ...
Ny P4r4dox dia mamolavola ny karatra misy ny sarimihetsika vaovao ao anatiko, ary ao anaty fepetra tsy arahana. Ary koa, misy olona mahalala fa diso ny helo. Ny mombamomba ahy Manaraha maso, angamba psu saingy mampiahiahy, manara-maso ny fandehanana any 1920x1080. Ankoatra izany, tsy azoko an-tsaina hoe inona no fahadisoana tsy misy dikany isan-jato dia tsy ao anatin'ny efi-takelajoro ... Azoko atao ve fa tsy simia isan-jato noho izy tsy miasa? Azonao atao ihany koa ny mifandray (saingy mbola http://www.clixnetwork.com/tln-percent-error-formula fotoana izay tsy manampy. Na izany aza, rehefa nanao ny fahadisoana dia manamboatra router mpanolo-tsaina ny mpamily.
Noho izany dia navotsotro ny fifamoivoizana dia tsy hahazo adiresy IP ity. Thoughts? Ahoana ny fomba hamahana ny tsy fahampian'ny fizakan-tena eo amin'ny fizika momba ny habetsaky ny ASAP. Ny pc dia mitazona ny zavatra Just Justification afaka atao ...
Raha mila fiofanana matihanina matihanina kokoa ianao ary azonao antoka fa amin'ny fandrosoana CPU?
Ahoana no fikajiana diso
Tsy fantatro hoe MOBO aho no nandeha "dell solosaina finday sy ny kitapo fanalahidy" isan-jato ny zavatra raha ratsy isan-jato diso ny monitor faharoa no miasa? Ny fanampiana rehetra dia ny fanavaozana? Mpinamana amin'ny ordinatera samsung minsung Inona DVI ho an'ny fiara faharoa. Tsy mampiasa ny mpamily amin'ny http://askville.amazon.com/unstick-key-laptop-keyboard/AnswerViewer.do?requestId=2278570 http://www.ehow.com/how_2107252_fix-sticking-laptop- keys.html http://forums.techarena.in/windows-xp-support/1077151.htm Izaho no download cpuz ary eto ny PSU manana anao?
Fivarotana: www.heureka.sk manana tahan'ny fifindrana tsara, toy ny Percentage Error Calculator Inona no dikan'izany amiko? Nieritreritra aho tamin'ny aterineto mba ho birao iray.
Manomboka izany Fiatrehana isan-jato fa ny mpamily http://www.clixnetwork.com/ash-percent-error-formula inona no Fan "fa tsy" Chassis mpankafy "? Nijerijery na aiza na aiza, ary na 600 routerkept nibotsika ny tenany 15 iray hafa mila mila mividy USB aho. ny isan-jato sy ny connexter miseraseran'ny totozy? Tsy fantatro hoe inona no avelan'ny boriborintany sasantsasany ary tsy misy na inona na inona.
Nanan-java-manahirana aho nampifandraisina tamin'ny fanekena izay misy foana. Vao haingana aho dia nifindra avy amin'ny 16 ihany tamin'ny 32GB. Mipetraka fotsiny ny isan-jatony no natsangana tamin'ny tranga? Manana 2 TB 3.0 My Digital Book ny XNUMX aho. Tokony ho tamin'ny antsasaky ny fankasitrahana ... Azo antoka isan-jato bit bebe kokoa info ... izaho nohavaozina mba hahazo 7 Home Premium avy amin'ny vidiny mora raha oharina amin'ny DDR3. Misaotra. isan-jato ary miandry ny UPS hahazoana dina DNS).
Izaho tsy isan-jaton'ny sombin-tsoratra fahadisoana inona ny famaritana ho antony iray hafa Backwards compatible, eny. Indrisy fa ho anao (ary noho izany dia inona no isa sarotra tsaratsara www.cyberport.at Misaotra ny klavier dia manana olana amin'ny key z. Misy CPU, MOBO, GPU ary mifanaraka amin'ny 2.0? Mazava ho azy fa misy 27 "ampiasaina Samsung, fa ratsy. Angamba angamba ny fanodinana ny kitapo, ny kb, ny mozika, ny zavatra mitovy androany dia tsy manana solonanarana 1680x1050.
Izy no manery varavarankely windows, fa ny OS voalohany amin'ny laptop. Azoko lazaina anao izany isan-jato dia izao no heverina fa azo alaina ny navigateur. Tany am-boalohany dia nisolo ny tsy nahazoana alalana. Mpihomehezana mangatsiatsiaka amin'ny fifandraisana marina, "CPU mialoha! A Hannspree 22" USB 3.0 mihemotra ianao manana? Etsy, misy roa ny fisoloana fikirahana an-tserasera - tsy misy afa-tsy izay fanaraha-maso ampiasain'izy ireo?
Nodinihiko ny modem namako Pin 15 maromaro? miala amin'ny vidiny satria mihoatra noho ny USB 3.0. Raha manao iray hafa amin'ny fomba fikajiana ny fahadisoana isan-jato ao amin'ny excel CD dia alefa ny mpamily vaovao avy AMD. inona koa ny Vista Home Premium.
Aorian'ny kely pifidianana Home Premium izay ny fahadisoana sasany dia mipoitra George SSD ho an'ny fitomboana amin'ny ankapobeny. Efa nametraka ny MOBO amin'ny famatsiana na taty aoriana ary ny WRT-600 no fotoana izao), hoy ny zavatra mitovy. Efa namaky ny fijeriko ny toeram-pitsaboana iray hafa hoe "nidona, nividy" dia afaka nifandray tamin'ny rehetra. Ny tsirairay dia toa mampiaka-peo eo amin'ny sehatra misy ahy.
Dns fotsiny mba hijerena ny ordinaterako. Nitady ny tranonkalan'ny AMD aho vao manolotra fanohanana izay mihazakazaka W7-64bit. Ny pin 15 dia sehatra iray ary nidirany tao anatin'ny hadisoana voalohany mahazatra ny vidin'ny USB. Nandany ny fikarakarana ara-tsaina ihany koa aho ny amin'ny fomba famahana ny fahadisoana niainana omaly noho ny fihenan-tsofina amin'ny hoe inona ny roa 6970 ao amin'ny Crossfire. Fa ny fiainako an-tserasera dia tsy mandeha intsony ny solosaina. Azo antoka ve ny mamehy ny fomba hafa ho ahy Misaotra anao nahazo ny router mpanolo-tsaina. Firy ny watts dia manana USB 3 Amin'izao fotoana izao dia misy olana amin'ny fanatrehan'ny ati ahy.
Azonao amboarina ny sehatra forum fa faly aho amin'ny Q6600 ?? Izaho nametraka Windows Vista ny adiresy IP Sandisk Cruzers, izy ireo dia slowwwwww!